Finland Barlamaanka oo diiday Sharciga Cusub ee Mideynta Qoysaska Kala Maqan
HomeWararka FinlandFinland Barlamaanka oo diiday Sharciga Cusub ee Mideynta Qoysaska Kala Maqan
October 24, 2021 Wararka Finland, Wararka Maanta 0
20200909 Täysistunto 9. syyskuuta 2020. Pääministerin ilmoitus EU:n elpymiskokonaisuudesta. Päivä oli ensimmäinen, jolloin täysistunnossa sai olla läsnä 74 kansanedustajaa yhtä aikaa, turvavälein.
Xisbiyada mucaaradka ah ee Finnishka iyo Dhaqdhaqaaqa ayaa soo gudbiyay mooshin kalsoonida loogala laabanayo sida dowladdu u maareyso soogalootiga Finland.
Xukuumadda ayaa codka kalsoonida ee Baarlamaanka Ku Fashilmatay gelinkii dambe ee Jimcihii 89 cod oo ay heshay 68 halka ay ka aamuseen 42 mudane.
Codbixinta ayaa waxaa keenay Finns Party iyo Movement taasi oo ku aadan maaraynta dawladda ee socdaalka, gaar ahaan isbedel qorshaysan in siyaasadda Finland ee bixinta magangelyada ku salaysan isu keenista qoyska oo la Fududeenayo.
Mooshinka, xisbiyada mucaaradku waxay ku doodeen in Finland ay noqon doonto “mid aad u soo jiidasho leh” oo ah ikhtiyaarka dadka magangelyo -doonka ah marka loo eego dalalka kale ee galbeedka Yurub.
Dhinacyada ayaa sidoo kale dhaleeceeyay kootada magangalyo-doonka ee dowladda iyo sidoo kale su’aalo la xiriira sida maamulka hadda jira uu ugu diyaar garoobay qalalaasaha socdaalka mustaqbalka.
Labada xisbi ee kale ee mucaaradka ah – National Coalition Party (NCP) iyo Christian Democrats – ayaan ku biirin mooshinka, laakiin labada dhinacba waxay muujiyeen kalsooni darro ay ku qabaan sida dowladdu u maareyso arrintan.
Intii lagu guda jiray dood-cilmiyeedka arbacadii, wasiirka arrimaha gudaha Maria Ohisalo (Green) ayaa beenisay eedeymaha xisbiyada mucaaradka ee ah in Finland ay ka guureyso khadka ballaaran ee Yurub ee siyaasadda socdaalka.
“Waxaa iska cad in xaaladda hadda ka jirta xudduudaha Belarus iyo hubin la’aanta mustaqbalka Afghanistan ay siyaabo badan uga hor imaaneyso Midowga Yurub iyo waddamada xubnaha ka ah. si ay u suurto gasho si waafaqsan ballanqaadyadayada caalamiga ah, ”ayuu Ohisalo u sheegay Baarlamaanka Arbacadii.
Shanta xisbi ee dowladda ayaa wali ka wada xaajoonaya shuruudaha hindise qabyo ah oo fududeynaya isu keenida qoyska dadka magangalyada laga siiyay Finland.